5 Xarumaha Old City Inta Badan Soojiidashada Leh Yurub | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 5 Xarumaha Old City Inta Badan Soojiidashada Leh Yurub
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo(Last Updated On: 23/01/2021)
Xarumihii hore ee soo jiidashada lahaa ee ku yaal Yurub ayaa tusaale fiican u ah awoodda taariikhda Yurub. Quaint guryaha yar yar, cathedral cajiib ah oo ku yaal bartamaha magaalada, qasriyo si fiican loo ilaaliyay, iyo fagaarayaasha dhexe, ku dar sixirka magaalooyinka Yurub. ah 5 inta badan xarumihii hore ee soojiidashada lahaa ee Yurub waxay ahaadeen kuwo dhawrsan qarniyadii.
Midabada, naqshadaha, halyeeyaduna way sii degganaadaan oo magaalo walba way istaagaan. Laga soo bilaabo Prague ilaa Colmar, Xarumaha waayeelka ee Yurub ayaa gabi ahaanba mudan booqashadaada, iyo ugu yaraan hal usbuuc dheer.
1. Prague Old City Center, Czech Republic
Faras magaaladii soo jiidashada laheyd ee Prague waa mid qurux badan. Fagaaraha bartamaha magaalada aad buu u weyn yahay, leh bistros qurux badan, kafateeriyada, iyo meelaha cuntada lagu iibiyo. Fagaaraha waa meesha ugu fiican ee dadka lagu daawado, dhadhamin Biirka Czech, iyo bolse la dhadhamiyay inta la sugayo saacadda xiddigiska. Muhiimadda bartamaha magaalada waa, Dabcan, munaaraddii cilmiga xiddigiska. Marka ha la yaabin markaad aragto dad badan oo dalxiisayaal ah oo isugu soo baxaya fagaaraha saacad kasta oo wareeg ah.
Muuqaalka gaarka ah ee soo jiidashada leh bartamaha magaalada Prague waa dhismooyin midabbo qurxoon leh. Qaabka Baroque kaniisadda St.. Nicholas iyo kaniisada gothic ee qarnigii 14aad ee Our Lady ka hor Tyn, ma ahan in la seego. Faras magaaladii hore ee Prague sidoo kale waa halka ay Suuqa Kirismaska ​​ayaa dhacaya, iyo faras magaalaha soojiidashada ah wuxuu isu rogay sheeko xariirooyin cajiib ah.
Faras magaaladii soo jiidashada laheyd ee Salzburg si aan caadi aheyn oo qurux badan. Isku dhafka naqshadaha Talyaaniga iyo Jarmalka, Da'da dhexe illaa qaababka qarnigii 19-aad, Abuur mid ka mid ah xarumaha magaalooyinka ugu soo jiidashada badan Yurub. Salzburg, sidoo kale loo yaqaan Altstadt waa a dhaxal ahaan dunida UNESCO goobta iyo maalin-safar ah oo cajiib ah oo ka socota Vienna, la heli karo tareen.
Wadnaha xaruntii hore ee magaalada Salzburg waa gurigii hore ee amiirka, Gobolka Residenz ee 180 qolal. Fagaaraha Residenz waa meesha aad ku raaxeysan karto suuqa Kirismaska ​​ee Zalsburg, iyo riwaayado muusig toos ah. Sidoo kale, Hubso inaad ku dhex wareegto bartamaha magaalada, ilaa Residenz isha, Gurigii carruurnimada ee Mozart, iyo Salzburg Cathedral.
Magaalada Salzburg waxay ku taal waqooyiga Alpes, la spiers ah, iyo domes-ka asalka ah. Webi wuxuu ka gudbaa mid ka mid ah magaalooyinkii duugga ahaa ee sida wanaagsan loo ilaaliyay ee Yurub isagoo ku daraya aragtida kaarka boostada.
Baaruud, ama sidaan wada ognahay Bruges, waa magaalo kale oo cajiiba oo leh magaalo duug ah oo soo jiidasho leh. Mar gurigii Vikings, maanta waa mid ka mid ah dahabka qarsoon ee Yurub. used’ luuqyada cidhiidhiga ah iyo jidadka ka samysan, guryaha midabada leh, kanaallada ayaa ka dhigaya goob dhaxalka UNESCO.
Markaad ku meeraysato agagaarka faras magaalaha ee Bruges, waxaad ogaan doontaa dukaamo yar yar oo bixiya xargo qurux badan. used’ xargaha ayaa caan ka ah adduunka oo dhan, marka waxaa sii dheer keenista sawiro qurux badan, shalash ayaa noqon doonta xusuus xusuus leh oo aad ka soo qaadan karto Bruges.
Baaruudda waxaa lagu tagi karaa gaadiidka dadweynaha ee ka yimaada Brussels, oo waxaad ku sahamin kartaa magaalada gaari, lugayn, ama doon kortaan. Markt waa meel fiican oo laga bilaabi karo safarkaaga da 'kasta, oo sii wad Belfry-ga cajiibka ah, iyo Kaniisada Our Lady Bruges. Hadaad rabto inaad ku qanciso faras magaalaha magaalada ee kore, markaa munaaradda Belfry waxay bixisaa aragtiyo aan caadi ahayn.
Xaruntii hore ee quruxda badnayd ee Colmar waa mid ka mid ah meelaha ugu jecel ee lagu booqdo Alsace. Faras magaaladii hore waa mid kamid ah xarumaha waayeelka ah ee magaalooyinka Yurub. Guryaha’ facades waxay dhawrtay bilicdooda u eg kaarka boosta iyo quruxdeeda waqtiyadii dhexe, oo waxaad ku arki kartaa walxaha hore ee Renaissance qaab dhismeedka ololaya.
Colmar waxaa ku wareegsan beero canab ah, iyo dabeecad ahaan xarumaha magaalada hore, waxaad ka heli doontaa kaniisadda quruxda badan ee Saint-Martin. Waxyaabaha kale ee aan lumin waa Little Venice oo ku taal Colmar, halkaas oo aad ka heli doontid maqaaxiyo yaryar oo qurxoon, buundooyinka, iyo kanaallo lagu baaro.
Waxaa jira fursado badan oo hoy ah magaalada yar ee Colmar, laakiin waxaad sidoo kale ku raaxeysan kartaa bartamaha magaalada hore ee Colmar, on a day-trip from Strasburg. The wonderful vineyards are the perfect excuse for a French biririf iyo sabtida iyo axada.
Qiimaha Zurich ilaa Colmar
Qiimaha Tareenka Stuttgart ilaa Colmar
5. Florence Old City Center, Italy
Duomo ee Florence, oo leh munaaraddeeda iyo Cathedral, xukuma faras magaaladii hore ee Florence si soo jiidasho leh, haybad, iyo qurux. Xaruntii hore ee magaalada Florence waa mid ka mid ah 5 ugu soo jiidashada badan oo qurux badan Yurub. Bartaada barta UNESCO ee dhaxalka adduunka waxay ka bilaabaneysaa Piazza del Duomo ilaa Piazza Della Signoria.
Haddii aad jeceshahay inaad ogaato wax badan oo ka mid ah Florence, markaa waa inaad sii wadataa Galleyda Uffizi iyo Boboli Gardens. Ma jirto hab ka wanaagsan oo lagu barto taariikhda iyo dhaqanka magaalo qarniyo badan marka loo eego farshaxanka. Florence waa magaalo cajiib ah oo Talyaani ah, meesha aad ku qaban karto panini, midig ka baxsan Duomo. Hadaad waqti haysato, ka dib u fuula dusha sare ee Duomo, waayo, views breathtaking mid ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan Talyaaniga.
Xarunta magaalada jir ee Florence waa a safar maalinle ah oo ka yimaada Venice. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad ugu yaraan u hurtaa 2 maalmo buuxa oo ku saabsan sahaminta goobaha iyo dhagaxyada Florence.
Haddii aad rabto inaad dib ugu soo noqoto wakhtigii qarniyadii dhexe iyo Renaissance, markaa kuwan 5 xarumihii hore ee magaalooyin ku yaal Yurub ayaa ah meelaha safarka ugu habboon. halkan at Save A tareenka, waan ku farxi doonaa inaan kaa caawinno qorsheynta safarkaaga xarumahan duugga ah ee soo jiidashada leh tareen.
Ma rabtaa inaad ku dhajiso bartayada mareegta "5 Xarumaha Old City Old Charms In Europe" boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcharming-old-city-centers-europe%2F - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
citycenter Fairytaletowns oldcitycenter OldcitycentersEurope tareen safarka TravelColmar travelflorence SafarkaPrague TravelSalzburg